13 Dugsi Sare ee Boodhinka ah ee England ee Ardayda Caalamiga ah 2022
October 12, 2021 Eze Thaddaeus
Waxaan sharad ku galay inaadan ogeyn inay jiraan dugsiyo hoy ah oo ku yaal England oo loogu talagalay ardayda Caalamiga ah. Boostada blog -ka ayaa iftiiminaysa oo ka hadlaysa dugsiyadan, sidoo kale, waxay bixisaa xiriiro arji oo aad ka samayn karto su'aalo dheeraad ah oo aad ku bilaabi karto hawsha arjiga.
Ardayga caalamiga ahi waa weedh caadi ah oo loo adeegsado tixraaca ardayda ka timid dalal kale oo u soo gala waddan kale ujeeddada keliya ee wax -barashada. Si kastaba ha noqotee, markaad maqasho weedha “arday caalami ah” maskaxdaadu waxay isla markiiba u aaddaa ardayda u socota inay wax ka bartaan jaamacad ama dugsi sare oo ku yaal waddan kale iyada oo aan xitaa ogaan inay daboolayso arday kasta oo ay ku jiraan ardayda dugsiga sare ama sare.
Sida ay England iyo guud ahaan UK uga jiraan xarumo jaamacadeed oo badan ayaa aqbala ardayda caalamiga ah, sidoo kale waxaa jira dugsiyo badan oo aqbala ardayda caalamiga ah. Arrintan awgeed ayaan u daabacnaa qoraalkan blog -ka ah iskuulada boodhinka ah ee England ee ardayda caalamiga ah. Si aad gacan uga geysato bixinta macluumaad kheyraad leh waalidiinta iyo mas'uuliyiinta doonaya inay ilmahooda ama waaxdooda u diraan dugsi boodhin oo ku yaal England.
Dugsiyo badan oo ku yaal England ayaa hadda aqbala ardayda caalamiga ah ee ka kala yimid daafaha dunida. Waxay u diyaariyaan iyaga si loo hubiyo inay ku jiraan jawi waxbarasho oo ku habboon waxbarashadooda. Maadaama ay carruurtani ka tegayaan waddankooda hooyo, dugsigu waa inuu hubiyaa inay ku raaxaystaan ​​deegaankooda cusub.
Ka sokow, inta badan dugsiyadan waxay siiyaan hurdo ama guryo hoy ah oo loogu talagalay ardayda dibedda inay ku sii jiraan. hawlaha manhajka dheeraadka ah.
Waxaa jira faa'iidooyin badan oo ku aaddan ka-qeybgalka dugsiyada boodhinka ah ee England ee ardayda caalamiga ah, sida bixinta waddo ammaan ah oo loogu talagalay jaamacadaha sare, waxbarashada heerka adduunka, guryaha hoyga oo si wanaagsan loo diyaariyey, ku-hadalka luuqadda, wax-ka-qabashada yar, iyo soo-gaadhista iyo waayo-aragnimada magaalo caalami ah. Kuwani waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka ka -qaybgalka dugsi boodhinka ah ee England.
1 Waa maxay Dugsiga Boodhinka ah ee England?
2 Ardayda Caalamiga ahi ma dhigan karaan Dugsiyada Boodhinka ah ee England?
3 Shuruudaha lagu dalbado dugsiga hoyga ah ee England
4 Dugsiyada Boodhinka ee ugu Fiican England ee Ardayda Caalamiga ah
4.1 1. DLD College London
4.2 2. Dugsiga Rossall
4.3 3. Dugsiga Caalamiga ah ee Mount Mill Hill
4.4 4. Iskuulka Westminster
4.5 5. Marymount International School London
4.6 6. Kulliyadda Foomka Lixaad ee Madaxa Bannaan ee Ashbourne
4.7 7. Dugsiga Kensington Park
4.8 8. Dugsiga Gaarka ah ee Brentwood
4.9 9. Dugsiga Harrow
4.10 10. Dugsiga Portland Place
4.11 11. Dugsiga Royal Russell
4.12 12. Kuliyadda Ciyaarta David
4.13 13. Dugsiga Gaarka ah ee Queenswood
5 Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Dugsiyada Hoyga ah ee England ee Ardayda Caalamiga ah
Waa maxay Dugsiga Boodhinka ah ee England?
Boodhinka England waa iskuul siiya ardeyda waxbarashada caadiga ah iyo sidoo kale hoy iyo cunno ardayda waqtiga teeramka.
Ardayda Caalamiga ahi ma dhigan karaan Dugsiyada Boodhinka ah ee England?
Haa, ardayda caalamiga ahi waxay dhigan karaan iskuulada boodhinka ah ee England, waxay ka caawin doontaa inay si fiican ugu hadlaan Ingiriisiga kaas oo sii caawin doona inay dugsiga ama ka shaqeeyaan meel kasta oo adduunka ah. Waxay kaloo ka caawin doontaa inay si fiican u bartaan bay'ada iyo gelitaanka waxbarashada sare ee England waxay noqon doontaa mid aad u fudud.
Shuruudaha lagu dalbado dugsiga hoyga ah ee England
Ardayda caalamiga ah, shuruudda ah in laga codsado dugsi boodhinka ah ee England waa si fudud in la helo fiisada ardayga, buuxi foomka dalabka ee dugsiga aad doorbidayso, oo aad bixiso khidmadaha dalabka iyo waxbarashada. Tani waa inay fuliyaan waalidiinta.
Dugsiyada Boodhinka ee ugu Fiican England ee Ardayda Caalamiga ah
Hoos waxaa ku qoran liistada la soo ururiyey ee iskuulada boodhinka ugu fiican ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah oo faahfaahintooda hoos looga sii hadlay;
Dugsiga Caalamiga ah ee Mount Mill Hill
Dugsiga Caalamiga ah ee Marymount London
Kulliyadda Foomka Lixaad ee Madaxbannaan ee Ashbourne
Dugsiga Kensington Park
Dugsiga Gaarka ah ee Brentwood
Dugsiga Portland Place
Dugsiga Royal Russell
Dugsiga Gaarka ah ee Queenswood
1. DLD College London
Kulliyadda DLD waa mid ka mid ah dugsiyada boodhinka ah ee ku yaal England oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee leh jawi waxbarasho oo habboon iyo jiif si ay ugu habboonaato baahiyaha ardayda oo ay uga dhigto kuwo raaxo leh sidii iyagoo aan weligood guriga ka bixin. Kulliyadda waxaa la aasaasay 1931 oo ku taal badhtamaha London oo iska indha -tiraysa Webiga Thames iyo Westminster, sidoo kale waa dhagax laga soo tuuray Guryaha Baarlamaanka.
Kulliyaddu waxay siisaa koorsooyin iyo barnaamijyo dabacsan oo aad u kala duwan oo ay ka mid yihiin A-Level, GCSEs, BTEC, iyo Barnaamijyada Aasaaska Caalamiga ah ee ardayda da'doodu tahay 14 ilaa 19 sano jir. Isagoo adeegsanaya hab waxbarasho oo saaxiibtinimo leh oo dabacsan, dugsigu wuxuu kobcin karaa kalsoonida ardayda ee kartidooda. Tirada fasallada yar-yarna waxay u oggolaanaysaa xiriirinta iyo shaqaalaha ardayga u go'ay oo xoogga saaray.
2. Dugsiga Rossall
Dugsiga Rosall waa mid ka mid ah iskuulada boodhinka ah ee England oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee leh taariikh dheer oo soo jireenka ah ilaa 1844 waxayna qirtaan ardayda ka soo jeeda kala duwan. Dugsigu wuxuu u heellan yahay inuu ku dhiirri -geliyo dhallinyarada inay horumariyaan kartidooda iyagoo siinaya waayo -aragnimo waxbarasho oo heerka koowaad ah marka loo eego bulshada wax -abuurka leh ee xiisaha leh iyo dhaqanka leh.
Ardayda da'doodu u dhaxayso 0-18 waxaa la dhigaa fasallo kala duwan oo looga baahan yahay da'dooda iyo kartidooda. Waxa kale oo jira shaybaarro casri ah iyo tas-hiilaad kale oo waxbarasho iyo sidoo kale adeegyo loogu talagalay hawlaha ka baxsan manhajka kuwaas oo muhiim u ah horumarinta waxbarashada ardayga. Ardayda leh Ingiriis aad u fiican waxay isku qori karaan mid ka mid ah koorsooyinka caadiga ah (ama “dugsiga weyn”), halka kuwa u baahan inay hagaajiyaan Ingiriisigooda ay iska qori karaan mid ka mid ah koorsooyinka caalamiga ah ee Fast-track.
3. Dugsiga Caalamiga ah ee Mount Mill Hill
Dugsiga Caalamiga ah ee Mount Mill Hill waxaa iska leh Dugsiga caanka ah ee Mill Hill waxaana la furay 2005 si loogu diyaariyo ardayda caalamiga ah inay wax ku bartaan UK, la qabsadaan luqad cusub, iyo sidoo kale, nidaam dhaqan, bulsho, iyo waxbarasho cusub. Dugsiga ugu weyn - Mill Hill School - waxaa la aasaasay sannadkii 1807 waxaana loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah iskuulada boodhinka ee London ugu wanaagsan oo wax lagu baro muwaadiniinta Ingiriiska iyo ardayda caalamiga ah ee jira 13 ilaa 18 sano.
Dugsiga Caalamiga ah ee Mount Mill Hill waa mid ka mid ah iskuulada boodhinka ugu fiican ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee leh hoy raaxo leh oo waasac ah - Collinson House - oo ku yaal bartamaha xerada. Waxaa jira qolal gooni ah oo loogu talagalay wiilasha iyo gabdhaha oo leh 1-3 qof oo qol deggan. Dugsiga ayaa sidoo kale lagu qalabeeyay kaabayaal isboorti oo aad u fiican halkaas oo ardaydu ay ka qeybqaadan karaan noocyada kala duwan ee howlaha isboortiga sida dabaasha, aerobics, cricket, badminton, basketball, tennis, squash, iyo jimicsiga.
4. Dugsiga Westminster
Dugsiga Westminster waa mid ka mid ah iskuulada boodhinka ah ee ku yaal England oo bixiya adeegyo maalinle ah iyo kuwo hoy u ah ardayda adduunka oo dhan, oo soo dhoweynaya kala duwanaanshaha dhaqamada, waayo -aragnimada, iyo sooyaalka waxbarasho ee ay keenaan. Hanaanka arjiga ee codsadayaasha caalamiga ah waxay la mid yihiin muwaadin UK ah, sidaa darteed, ardaydu waxay ku qaadan karaan imtixaanka gelitaanka dalkooda laakiin waa inay dugsiga u yimaadaan wareysiga maalinta lagu casuumo inay yimaadaan.
Shuruudda kale ee laga rabo codsadayaasha caalamiga ah waa inay ahaadaan kuwo si fiican ugu hadla Ingiriisiga, ardayda wax ku baratay Ingiriisiga ugu yaraan saddex sano kahor imaanshaha Westminster School ayaa la doorbidi karaa. Ardeyda da'doodu u dhaxayso 7 ilaa 16 ayaa loo oggolaadaa dugsiga. Qolal hurdo oo aad u fiican, shaybaarro, iyo qalab isboorti ayaa la bixiyaa si kor loogu qaado barashada ardayga loona abuuro jawi waxbarasho oo habboon.
5. Marymount International School London
Dugsiga Marymount waxaa la aasaasay 1955 oo ah Diinta Qalbiga Quduuska ah ee Mary oo ah maalin katoolik ah oo madaxbannaan iyo iskuul boodhin ah oo loogu talagalay gabdhaha da'doodu u dhaxayso 11 ilaa 18. Waxay kaloo qirtaa ardayda dalalka kale inay ka dhigto mid ka mid ah dugsiyada boodhka ah ee England ardayda si buuxda ugu heellan waxbarashada, dareenka, ruuxa, iyo horumarka bulshada ee ardaydeeda.
Gabdhaha ka soo jeeda dhaqammada kale ee dhaqanka iyo diinta ayaa sidoo kale laga aqbalaa dugsiga si loogu diyaariyo barnaamijyadiisa IB ee gaarka ah. Kumbiyuutar-ka-goynta iyo shaybaarrada farshaxanka, iyo sidoo kale tas-hiilaadka isboortiga, ayaa laga heli karaa dugsiga.
6. Kulliyadda Foomka Lixaad ee Madaxa Bannaan ee Ashbourne
Ashbourne College waa dugsi sare oo gaar loo leeyahay oo ku yaal London oo siinaya koorsooyin Heer ka badan 35 sano ardayda UK iyo ardayda caalamiga ah. Kulliyaddu waxay bixisaa adeegyo hoy iyo maalmeed iyo sidoo kale ikhtiyaarka barashada masaafada ee internetka. Waa mid ka mid ah iskuulada boodhinka ee ugu fiican London oo laga yaabo inaad rabto inaad u dirto ilmahaaga ama waaxda, si aad ugu raaxaysato waxbarasho tayo leh.
Inta ardaygu joogo Ashbourne, waxaa lagu meeleeyaa macallin shaqsiyeed kaas oo siiya taageero iyo hagitaan tacliimeed iyo xoola -dhaqato. Iskuulku wuxuu kaloo bixiyaa barnaamijyo dalab jaamacadeed oo khaas ah oo loogu talagalay koorsooyinka tartanka sida Daawada, Maaliyadda, Injineerinka, iyo koorsooyinka la xiriira iyo gelitaanka jaamacadaha Cambridge iyo Oxford.
7. Dugsiga Kensington Park
Dugsiga Kensington Park wuxuu ku yaalaa wadnaha London waxaana la aasaasay sanadkii 2017 isagoo siinaya waxbarasho dugsi sare ardayda da'doodu tahay 11-18 sano jir. Waxay aqbashaa ardayda isku dhafan ee ka soo jeeda dhammaan dhaqan-dhaqaale, dhaqan, iyo diimeed. Tani waxay ka dhigaysaa dugsiga mid ka mid ah dugsiyada boodhka ee England maadaama ay siiso hoy ku habboon hudheellada ardayda caalamiga ah ee ka diiwaangashan dugsiga.
Barnaamijyada ayaa sidoo kale loo heli karaa ardayda da'doodu u dhaxayso 7 ilaa 9 sano laakiin waa inay noqdaan arday maalmeed. Barnaamijyada A-level iyo GCSE ayaa sidoo kale la bixiyaa si loogu diyaariyo ardayda gelitaanka jaamacadaha ugu fiican UK. Waxaa jira koox oggolaansho caalami ah oo had iyo jeer diyaar u ah inay caawiyaan ardayda ajnabiga ah si ay ugu diyaar garoobaan safarkooda Dugsiga Kensington Park.
8. Dugsiga Gaarka ah ee Brentwood
Dugsiga gaarka loo leeyahay ee Brentwood waa mid ka mid ah iskuulada boodhinka ah ee England, oo la aasaasay 1557 welina wuu shaqeynayaa isagoo siinaya mid ka mid ah waxbarashada ugu horreysa jaamacadda kahor ardayda da'doodu tahay 3 ilaa 18 sano. Kaliya ardayda da'doodu tahay 13 iyo wixii ka sareeya ayaa joogi kara hudheelka ama qolalka hurdada ahaan.
Dugsigu wuxuu bixiyaa barnaamijyo tacliimeed GCSE, A-Level, iyo IB halka koorsooyin luuqadda Ingiriisiga oo taageero ah la siinayo ardayda ajnebiga ah. Xarumaha uu dugsigu leeyahay waxaa ka mid ah qolka muusikada oo leh qalab muusig oo kala duwan oo loogu talagalay ardayda doonaya inay ku lug yeeshaan muusigga.
9. Dugsiga Harrow
Dugsiga Harrow waa wiil keli ah oo ku yaal England oo la aasaasay 1572 wuxuuna bixiyaa barnaamijyo waxbarasho A-heerarka, dugsiga sare, iyo GCSE. Waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya dhammaan wiilasha- da'doodu u dhaxayso 13 illaa 18- dugsiyada boodhinka ah ee England oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee bixiya waxbarashada caadiga ah ee heerka Ingiriiska.
Dugsigu wuxuu leeyahay xarun dhaqdhaqaaq dheeri ah oo leh isboorti caan ah oo ay ardaydu ku hawlan yihiin, oo ay ku jiraan kubbadda koleyga, karatee, kubbadda cagta, dabaasha, polo-biyoodka, judo, cricket-ka, golf-ka, iyo qaar kaloo badan.
10. Dugsiga Portland Place
Waxay ku taal bartamaha Bartamaha London oo aqbashaa wiilasha iyo gabdhaha da'doodu u dhaxayso 10 ilaa 16 sano waa mid ka mid ah iskuulada boodhinka ee ugu fiican England ardayda caalamiga ah - Portland Palace School. Dugsigu wuxuu siiyaa oggolaansho muwaadiniinta UK-ku-saleysan iyo ardayda ajnabiga ah ee ka kala yimid meelo kala duwan wuxuuna isku geeyaa si loo gaaro yool la mid ah-oo laga gaaro ujeeddadooda waxbarasho.
Waxaa jira qolal jiif oo gooni ah oo loogu talagalay wiilasha iyo gabdhaha oo leh 1 illaa 3 arday oo qol degan. Qolalku waa kuwo wanaagsan oo jawiga waxbarashaduna sidoo kale wuxuu leeyahay tas -hiilaad ka dhigaya barashada ardaydu mid xiiso iyo xamaasad leh.
11. Dugsiga Royal Russell
Dugsiga Royal Russell waa mid ka mid ah iskuulada boodhinka gaarka loo leeyahay ee ugu fiican England ee ardayda caalamiga ah. Waxaa la aasaasay 1853 waxayna sii wadaysaa bixinta barnaamijyo waxbarasho oo hal -abuur leh ilaa maanta. Barnaamijyada waxaa la siiyaa fasalada dhexe, GCSE / IGSCE, iyo A-level ardayda da'doodu tahay 11 ilaa 18 sano. Adeegyada maalinta iyo hoyga ayaa dugsigu bixiyaa, hoygu wuxuu gaar ahaan u yahay ardayda caalamiga ah. Waxa kale oo jira qoraallo loogu talagalay ardayda da'doodu tahay 3 ilaa 11 sano oo ku jira qaybta dugsiga hoose.
12. Kuliyadda Ciyaarta David
Kani waa mid ka mid ah iskuulada boodhinka ugu fiican ee England loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee la aasaasay 1974 waana mid ka mid ah hormuudyada Kulliyadaha Foomka Lixaad ee Madaxa-bannaan ee London loogu talagalay ardayda 13 illaa 22-jirka ah. Barnaamijyada A-Level iyo GCSE ayaa sidoo kale la siiyaa wiilasha iyo gabdhaha iskuulka ku qoran.
Ardayda ka qalin jabisa David Game waxaa loo soo bandhigaa gelitaanka qaar ka mid ah jaamacadaha caanka ah ee UK sida UCL, Imperial, Oxford, iyo Cambridge.
13. Dugsiga Gaarka ah ee Queenswood
Queenwood waa dugsi boodh ah oo gaar loo leeyahay oo loogu talagalay gabdhaha da'doodu u dhaxayso 11 ilaa 18 sano oo bixiya barnaamijyo waxbarasho GSCE iyo A-heer ah kuwaas oo ka dhiga kuwo ku habboon jaamacadaha ugu caansan UK iyo adduunka oo dhan. Bulshadu waa mid firfircoon oo kala duwan halkaas oo ardaydu wax ku baran karaan jawi aad u ballaaran, madadaalo leh, oo xiiso leh kana gudbaan caqabado kasta si loo gaaro natiijo aad u wanaagsan.
Ardaydu waxay ka qayb qaadan karaan waxqabadyo ka baxsan manhajka iyada oo loo marayo waxyaalaha isboortiga ee dugsigu bixiyo. waxqabadyada waxaa ka mid ah miiska miiska, xeegada, xirfadaha is-difaaca, aerobics-ka, faras-fuulka, kubbadda cagta, doonidda, jimicsiga, iyo qaar kaloo badan.
Kuwani waa 13ka dugsi ee boodhinka ah ee ugu sarreeya England ee ardayda caalamiga ah, waxaad go'aansan kartaa inaad aado dugsiyo isku dhafan ama kala duwan, hadba kii si fiican ugu shaqeeya ilmahaaga. Sidoo kale, sida arday caalami ah, khidmadda waxbaridda ee ilmahaagu aad bay uga sarraysaa marka loo eego muwaadiniinta.
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Dugsiyada Hoyga ah ee England ee Ardayda Caalamiga ah
Immisa ayuu ku kacayaa dugsiga boodhinka ee England?
Qiimaha iskuulka boodhinka ah ee UK wuu ku kala duwan yahay dugsi ilaa dugsi laakiin wuxuu ku kici karaa inta u dhaxaysa £ 20,000 ilaa £ 30,000 sanadkiiba canuggii.
Ardayda caalamiga ahi ma tagi karaan dugsiga boodhinka ah ee England?
Haa, ardayda caalamiga ahi waxay aadi karaan dugsi boodhinka ah oo ku yaal England, oo tiro ka mid ah iskuuladan ayaa lagu taxay oo lagaga dooday qoraalkan balooggan, si taxaddar leh u akhri si aad u bilowdo codsigaaga waqtiga ku habboon.
Ma jiraan dugsiyo boodhin bilaash ah oo ku yaal England?
Dugsiyada boodhinka ee gobolka ee England ayaa bixiya waxbarasho lacag la'aan ah laakiin ardaydu waa inay bixiyaan khidmada hoyga.
Dadka Mareykanka ma aadi karaan dugsiyada hoyga ee England?
Haa, way awoodaan laakiin nidaamka waxbarasho ee halkan wuu ka duwan yahay sida uu yahay Mareykanka.
7 Sababood oo ay tahay inaad u tixgeliso inaad wax ku barato UK
25 + Top MBA oo aan lahayn Khibrad Shaqo UK, USA, iyo Kanada
Deeq waxbarasho oo buuxda oo loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah ee Boqortooyada Midowday
18 Dugsiyada Ilkaha ee Ugu Fudud Ee Lagu Galiyo | US, UK, Canada
10 Jaamacadaha ugu Qaalisan UK ee Ardayda Caalamiga ah
dugsiyada boodhinka ah ee England ee ardayda caalamiga ah
Previous Post:Koorsooyinka Waxbaridda Online -ka ee ugu sarreeya ee Koonfur Afrika
Post Next:Hagaha waxbarashada UK ee Leicester